Benefits Of Solar Powered Railroad Crossing anonongedzera And Road Signs | Save A Train
musha > Chitima Kufamba > Benefits Of Solar Powered Railroad Crossing anonongedzera And Road Signs
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 31/03/2020)
The kuwedzera kuitika kune ari zvakawanda zvakatipoteredza-ushamwari akaita kwakamutsa vazhinji, uye dzaisiyana mitema matanho munyika yose, mumaguta makuru nemisha maduku zvakafanana. Mumwe zviratidzo zvakawanda izvi kunowedzera renewable simba mune vanhu zuva nezuva muupenyu uye basa munyaya yakanga kumbobvira vafunga nezvechisarudzo pamberi. Imwe nzvimbo dzakadaro mugwagwa vakachengeteka, umo kushandiswa pazvinhu zvose kubva mumugwagwa zviratidzo kuti motokari mwenje kuti zvichikurukura nehurongwa, saka kuita mugwagwa ezvinhu mamwe zvinoonekwa pane imwe isingadhuri mutengo, uye zvakare kuchengetedza vose mari and the planet in the process.
Nepo zviratidzo mumugwagwa haufaniri chaizvoizvo kuti chiedza kuita basa ravo, Lights zvachose vane chimwezve vanobatsirwa kuita vatyairi zvakawanda anoziva. Inoshandisa simba rezuva mugwagwa zviratidzo vakapakata akatungamirira zviedza anopa nzira nani maonero, zvose masikati uye usiku (Unogona kuziva mitemo yavo oparesheni pano) Anopa zvakanaka kushanda siyana kunyange panguva utsinye mamiriro ekunze izvo kazhinji pave tsaona-asingatani ezvinhu. Zvisinei kwavakanga - dzimwe panosangana, yokuchinja kana njanji kuyambuka, these signs ensure greater safety for pedestrians and vehicles alike.
Main Advantages Of Solar-Powered Road Signs
Kubatsira zvikuru uye kushandisa zviratidzo izvi ndechokuti simba kuti vanodzirurira haubvi unopfuta Coal. Hazvina kusvibisa nenzira marasha, mafuta, uye gasi vanorapwa, izvo zvinoita 100 muzana zvakatipoteredza-ushamwari. The chete mamiriro ezvinhu zvakakwana jeka maawa kuitira chezuva kukohwewa, vagotendeuka uye inochengeterwa gore-refu kushandiswa. Sezvo runonyengera sezvo chinodiwa ichi ingaita, kamwe mhosva, installation iri mari here nokuda nehanya kwayo rwokufamba, iyo inoita nembiru seizvi unoshanda chete kana paine motokari chaiyo mumugwagwa, panzvimbo kumativi wachi. Solar simba hunoshandiswa vari chinoumbwa nezvinhu zvakawanda uye chaizvoizvo zvinonakidza, havasi ivo?
Sezvo zvivako izvi zvakaoma kufuratira, ivo chiwedzere kuziva vatyairi uye munofamba nevanhu vari roundabouts, munzvimbo dzinopakwa motokari, dzine ngozi kuti anozivikanwa chikonzero tsaona, nezvimwewo. Chokwadi kuti havafaniri waya kana zvemagetsi rine pedyo kuti ishande zvinoita kuti aaise chero, Kunze kwokuti vari zvechokwadi rweruzhinji uye kuderedzwa nokuchengetedza. Kubatsirwawo ndechokuti vari nyore kuisa - ivo chinogona kubatanidzwa kana kuti mapango chechigarire kana inotakurika mumwe mukuru mufambo. Izvi zvinoita kuti mukuru munguva roadworks, sezvo vanogona kuisa, vakabvisa Munenge hapana nguva uye pasina kukonzera Kuvhiringidza kune twetsoka pedyo.
Solar Railroad anonongedzera
Railroad takayambuka anonongedzera kuti kushandisa chiedza chezuva simba inogona kushandiswa zvose maindasitiri dzinodengenyeka uye mumaruwa. Products izvi mhando, zvakaita se https://www.solarlightingitl.com/solar-railroad-crossing-systems/ detect approaching trains by virtue of wireless sensors, uye kamwe vatanga chiratidzo, Ivo Activate kuyambuka mwenje uye ruzha kuti uende mberi kusvikira nechitima dzapfuura uye zvinokuchengetedzai kuyambuka Makwara. anonongedzera izvi kakawanda kupinda vaviri vaviri ari mumwe parutivi chitima mazambuko, uye Wireless kubatana Minamato haipindurwe pamusoro uye kure panguva imwecheteyo. Zvichida yakanakisisa chinhu pamusoro kugadzwa avo ndechokuti hapana zvimwewo mabhokisi kana refu netambo zvinobatanidzwa.
Yose Hurongwa rinoshandisa zuva simba kuti zvakakwana okupedzisira 10 maawa risina kumiswa basa kamwe mhosva zvakakwana asi ane bhatiri negadziriro yeparutivi, inofanira pane kuva vasina chezuva kana vaunganidza simba iri vaneta. The Hurongwa chiri dzimwe nguva chete kusashanda kana zvimwe chiite zvinodiwa zvakasangana, akadai chaiyo nokukurumidza, panguva iyo kuuya chitima zvinofamba, semuyenzaniso. Inogona kumisa kuti chete moto mhere kana mutengo uri pamusoro 65 mph uye hanya motokari, zvinokambaira nomumugwagwa kwaitora nguva pane kuti. Options vari dzaisiyana.
Kunyange zvazvo mutema simba asina chikamu zvizere upenyu avhareji munhu asi, tinogona kuona kuvapo uye kushandiswa kwayo kukura nokuda miniti, kupinda vakawanda mabhora zvoupenyu. Zvechokwadi remangwana redu uye inomirira zvakatipoteredza-vanoziva nzira pachipfuva mberi pasina zvimwe kukuvadza kuputsika uye kusimba mwero zvakasikwa kuti watopiwa zvakakomba rinoitei nevanhu. Inoshandisa simba rezuva mugwagwa uye njanji mhinduro vari muenzaniso wakanaka zvinobatsira, akazochena uye chipa mafomu guru dzinongoitika chinogona.
Tine hanya kwezvakatipoteredza uye tichida unyanzvi vanofambira. Tanga nokutaura Mugshot chitima rwendo pamwe Save A Train, nhasi!
Unoda embed yedu Blog romukova “Benefits Of Solar Powered Railroad Crossing anonongedzera And Road Signs” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsolar-powered-railroad-crossing-signal%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Munyaya inotevera batanidzo, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, Link iyi nokuti Chirungu pakutengeserana kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / Ave kuti / TR kana / kes uye mimwe mitauro yaunenge wasarudza.